XOG:- Shariif Xasan oo iska diiday inuu u tartamo xilka guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Shariif Xasan oo iska diiday inuu u tartamo xilka guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa diiday waanwaan lagu doonayay inuu ka tanaasulo tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ee dhawaan dalka ka dhici doonta.
Socdaalka Shariif Xasan Sheekh Aadan uu haatan ku joogo magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa noqonaya kii seddaxaad, waxaana arrimaha ugu waaweyn ee lagu qancinayay ka mida ahaa:-
In musharaxnimadiisa xilka madaxweynaha Soomaaliya uu ka tanaasulo.
In xilka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu isku sharaxo.
Ama inuu keesado qofkii noqon lahaa guddoomiyaha baarlamaanka
Arrimahaan oo dhan aynu kor kusoo sheegnay ayaa la sheegay inuu Shariifka ku gacan seyray, islamarkaana uu ku taagan yahay inuu u tartamo xilka madaxweynaha Soomaaliya wax kastoo dhaca.
Dhinaca kale, warar hoose ay warbaahinta Bulshoweyn heleyso ayaa sheegaya in Shariif Xasan Sheekh Aadan uu si cad u diiday inuu isbaheysi la galo madaxweynaha haatan xilka haaya Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo la sheegay inuu lacag badan u ballan qaaday, balse uu Shariifka arrinkaasi kasoo horjeestay.
Si kastaba ha ahaatee, Idaacadda VOA-da ayaa maalintii shalay wareysi ay la yeelatay Shariif Xasan ku xaqiijiyay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, isagoona rajo weyn ka muujiyay inuu ku guuleysan doonno doorashadaas.